'न्युयोर्कमा सांस्कृतिक केन्द्रको आवश्यकता अझ टड्कारो महसुस भयो' - Khasokhas Weekly
-राजेश भट्ट, संयोजक, महापुराण मुलसमिति
जुन उद्देश्यका साथ महापुराण आयोजना गर्नुभएको थियो , त्यो सफल भयो त ?
हामीले लक्ष्य राखेभन्दा धेरै रकमको प्रतिबद्धता आएको छ । यो हाम्रो समुदायबाट आएको निकै सकारात्मक रेस्पोन्स हो । हामीले यो रकमलाई निकै उत्साहित रुपमा लिएका छौं । नेपाली समुदायले नेपाली मन्दिर र सांस्कृतिक केन्द्रको आवश्यकता एकदमै टड्कारो रुपमा महसुस गरेर सहयोग गरेको अनुभव भएको छ । त्यही अनुशार हामीले काम अगाडि बढाउनेछौ । हामीले सोंचेको भन्दा धेरै राम्रो भयो । हामीले अहिले बेसमेन्ट र पहिलो तल्ला बनाएर नेपाली मन्दिर र सामुदायिक केन्द्रको निर्माण गर्ने भनेका थियौं । तर त्यसलाई परिमार्जित गरेर तीन तला बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।
महापुराणमा दबाब सृजना गरेर रकम कबोल गराइएको त होइन ?
त्यसरी बलजफ्ती कबोल गराइएको छैन । सबै भक्तजनहरुले आफ्नो इच्छाले नै दिनुभएको जस्तो लाग्छ । दबाब सृजना गरेर केही कार्य भएको छैन । हामीले सोचेको भन्दा धेरैको उपस्थीति भएको छ । जुन निकै उत्साहपूर्ण रह्यो ।
पहिले नै भवन निर्माण गर्ने भनिएको थियो । तर अब ढिलाई हुँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ ?
अब ढिलाई हुँदैन । किनभने हाम्रो नयाँ बोर्ड आउनासाथ नै यो पहल थालेका हौं । हामीले डिजाइन गरेर नक्सा लगभग तयार भइसकेको छ । त्यसमा हामी केही परिमार्जन गर्दैछौं । हामीले रकम नहुदै पनि यो काम अगाडि बढाउन पहल थालेका थियौं । आधा काम सकिएको छ । निर्माणको प्रकृया अगाडि बढिसकेकाले यो दुईबर्षभित्र बन्ने कुराको आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।
‘न्युयोर्कमा सांस्कृतिक केन्द्र बनाउन लक्ष्य भन्दा धेरै रकम कबोल हुँदा निकै उत्साहित छौं’